ICornell Alliance for Science ngumkhankaso we-PR Wemboni Yezolimo - Ilungelo Lokwazi laseMelika
Ukuqondiswa kwemikhumbi yokuguquguqula
Ukuphishekela iqiniso nokwenza izinto obala kwezempilo yomphakathi
ICornell Alliance for Science ngumkhankaso we-PR woMkhakha wezoLimo
Phrinta imeyili Ungahlukıselana Ephathwayo
Posted on September 23, 2020 by UStacy Malkan
Ngaphandle kwegama layo elizwakala njengezifundo nokusebenzisana nesikhungo se-Ivy League, i- ICornell Alliance yeSayensi (I-CAS) ngumkhankaso wezobudlelwano nomphakathi oxhaswe yiBill & Melinda Gates Foundation oqeqesha abanye abantu emhlabeni jikelele ukukhuthaza nokuvikela izitshalo kanye nezolimo ezikhiqizwa izakhi zofuzo emazweni akubo. Izazi eziningi, ochwepheshe bezinqubomgomo zokudla, amaqembu okudla kanye nawokulima baye babiza imiyalezo enganembile namasu akhohlisayo abangane be-CAS abasebenzise ukuzama ukudicilela phansi ukukhathazeka mayelana nezinye izindlela kwezolimo zezimboni.
NgoSepthemba, i-CAS kumemezela $ 10 million ngemali entsha evela eGates Foundation, okuletha inani eliphelele lamaGates uxhaso ku- $ 22 million kusukela ngo-2014. Imali entsha iza njengoba iGates Foundation injalo sibhekene nokuhlehliswa yizolimo zase-Afrika, amaqembu okholo kanye nezenkolo ngokuchitha izigidigidi zamaRandi ezinhlelweni zokuthuthukisa ezolimo e-Afrika lokho imibukiso yobufakazi yehluleka ukuqeda indlala noma ukuphakamisa abalimi abancane, njengoba zigxila ezindleleni zokulima ezizuzisa izinkampani ngaphezu kwabantu.
Leli phepha libhala izibonelo eziningi zemininingwane engeyona evela ku-CAS nabantu abaxhumene neqembu. Izibonelo ezichazwe lapha zinikeza ubufakazi bokuthi i-CAS isebenzisa igama likaCornell, idumela negunya lakhe ukuqhubekisela phambili i-PR kanye ne-ajenda yezepolitiki yezinkampani ezinkulu zamakhemikhali nembewu emhlabeni.
Imishini ehambelana nezimboni nemiyalezo
I-CAS yethulwa ngo-2014 ngesibonelelo sika- $ 5.6 million seGates Foundation futhi ithembisa ukuthi “dicilela phansi ”impikiswano cishe ama-GMO. Iqembu kusho umsebenzi wayo “ukukhuthaza ukufinyelela” ezitshalweni nasekudleni kwe-GMO ngokuqeqesha “ababambisene nesayensi” emhlabeni jikelele ukufundisa imiphakathi yabo ngezinzuzo ze-biotechnology yezolimo.
Iqembu lomkhakha wezibulala-zinambuzane likhuthaza i-CAS
Ingxenye esemqoka yecebo le-CAS ukuqasha nokuqeqesha Abaholi Bomhlaba Wonke Bobuholi kuzindlela zokuxhumana nezokukhuthaza, kugxilwe ezifundeni lapho kunokuphikisana nomphakathi embonini ye-biotech, ikakhulukazi amazwe ase-Afrika amelane nezitshalo ze-GMO.
Umsebenzi we-CAS ufana ngendlela emangalisayo uMkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology (I-CBI), umkhakha wemboni yezibulala-zinambuzane oxhase uhlelo lobudlelwano bomphakathi olunayo ihlangene neCAS. Iqembu lezimboni lisebenzele ukwakha imifelandawonye ngaphesheya kochungechunge lokudla futhi qeqesha abantu besithathu, ikakhulukazi izifundiswa nabalimi, ukunxenxa umphakathi ukuthi wamukele ama-GMO.
Imiyalezo ye-CAS ihambisana eduze nemboni yezibulala-zinambuzane i-PR: ukugxila kwe-myopic ekutholeni izinzuzo ezikhona zesikhathi esizayo zokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo ngenkathi kudlalwa phansi, kunganakwa noma kuphikwa izingozi nezinkinga. Njengemizamo yezimboni ze-PR, i-CAS ibuye igxile kakhulu ekuhlaseleni nasekuzameni ukwehlisa isithunzi abagxeki bemikhiqizo yezolimo, kufaka phakathi ososayensi nezintatheli eziphakamisa ukukhathazeka kwezempilo noma kwemvelo.
I-CAS nababhali bayo bathole ukugxekwa kwizifundiswa, abalimi, abafundi, amaqembu omphakathi kanye nezinhlangano ezilawula ukudla abathi leli qembu lithuthukisa imiyalezo enganembile futhi edukisayo futhi lisebenzisa amaqhinga angalungile. Bona isibonelo:
Ochwepheshe be-agroecology bahoxa kuCornell Alliance for Science Agroecology Webinar, becaphuna ukwenzelela - I-Community Alliance for Global Justice (9.30.20)
Izithunywa ze-Agenda kaGates: Isifundo Esenziwe ngeCornell Alliance for Science Global Leadership Fellows Programme, yi-AGRA Watch, Community Alliance for Global Justice (8.7.20)
Abafundi Kufanele Baqhubeke Babuze Ukuziphatha KweCornell Alliance for Science, nguFern Anuenue, iHawaii Alliance for Progressive Action, iCornell Daily Sun (11.19.19)
UMark Lynas ugxeke ngokuxhaphaza izithombe zabalimi base-Afrika ukukhuthaza ama-GMO, I-African Center for Biodiversity release (2018)
Ukusetshenziswa okungagunyaziwe kukaMark Lynas kwezithombe zabalimi kuzindlela ezidukisayo nezingenasimiso zokukhuthaza izitshalo ze-GM eTanzania, kubika u-Eugenio Tisselli, PhD, no-Angelika Hilbeck, PhD. (2018)
Imbewu Ye-Neo-Colonialism: Kungani Abagqugquzeli be-GMO Beyiphutha Kangaka Nge-Afrika, isitatimende se-Alliance for Food sobukhosi e-Afrika (2018)
Izindlela ezi-6 le nyuvesi ye-Ivy League esebenza njengefemu ye-PR yokudla okungenamsoco, ama-GMO kanye ne-pesticides, nguSophia Johnson, Salon (2017)
Abalimi baseNew York bafuna uCornell axoshe 'i-Alliance for Science,' Ukukhishwa kwabezindaba zeBioscience Resource Project (2016)
Impikiswano yeGMO: Okuhlangenwe nakho Komfundi Omunye KwePro-GMO Propaganda eCornell University, nguRobert Schooler, i-Independent Science News (2016)
AmaGates axhaswe ngemali yiCornell Group Misfires ku-Protest of Vandana ShivaI-USRTK (2016)
Kungani iCornell University ibamba umkhankaso we-GMO propaganda? nguStacy Malkan, The Ecologist (2016)
IGates Foundation Ixhaswe yi-Pro-GMO Cornell Alliance yeSayensi Ekuhlaselweni, Umbiki Wobugebengu Benkampani (2015)
Impi yabagxeki bokudla okushintshwe izakhi zofuzo, nguTimothy Wise, i-Food Tank (2015)
Izibonelo zemiyalezo edukisayo
Ochwepheshe bezobunjiniyela, i-biology, i-agroecology nenqubomgomo yokudla babhale izibonelo eziningi zezimangalo ezingalungile ezenziwe nguMark Lynas, umuntu owayevakashele eCornell obhale inqwaba yama-athikili evikela imikhiqizo yezolimo ngegama le-CAS; bona ngokwesibonelo eyakhe izindatshana eziningi ezikhuthazwe yi-Genetic Literacy Project, iqembu le-PR lelo isebenza neMonsanto. Incwadi kaLynas ka-2018 ithi amazwe ase-Afrika amukele ama-GMO, futhi anikeze isahluko ekuvikeleni iMonsanto.
Izimangalo ezinganembile ngama-GMO
Ososayensi abaningi bagxeke uLynas ngokwenza kwabo izitatimende ezingamanga, “Ayinasayensi, ayinangqondo futhi ayinangqondo”Izimpikiswano, ukugqugquzela imfundiso phezu kwedatha nocwaningo kuma-GMO, ukuvuselela amaphuzu okukhuluma embonini, nokwenza izimangalo ezinganembile ngemithi yokubulala izinambuzane “bonisa ukungazi okujulile kwesayensi, noma umzamo osebenzayo wokwenza ukungabaza. ”
"Uhlu lwelondolo lokuthi uMark Lynas wenza iphutha ngani kuma-GMO kanye nesayensi lubanzi, futhi luye lwaphikiswa ngephuzu ngabathile bezazi zezolimo nezazi zezinto eziphilayo," kubhala u-Eric Holt-Giménez, umqondisi omkhulu weFood First, ngo-Ephreli 2013 (uLynas wajoyina uCornell njengomuntu owayevakashile kamuva ngalowo nyaka).
“Akanabufakazi futhi akanalo iqiniso”
Amaqembu azinze e-Afrika agxeke uLynas isikhathi eside. I-Alliance for Food sobukhosi e-Afrika, umfelandawonye wamaqembu angaphezu kwama-40 okudla nawokulima e-Afrika yonkana uchaze uLynas njengo “ingcwethi yokundiza” “ukudelela abantu base-Afrika, isiko kanye namasiko akhe akungabazeki.” UMillion Belay, umqondisi we-AFSA, kuchaza uLynas njengomuntu "obandlulula ngokobuhlanga ophusha indaba yokuthi ezolimo zezimboni kuphela ezingasindisa i-Afrika."
Ekushicilelweni kwabezindaba kuka-2018, i-African Centre for Biodiversity eseNingizimu Afrika ichaze amaqhinga angekho emthethweni uLynas awasebenzisile ukukhuthaza i-ajenda ye-biotech lobby eTanzania. "Kunodaba olumayelana nokuziphendulela kanye nesidingo sokubusa iCornell Alliance for Science, ngenxa yolwazi okungelona iqiniso nokuthi bangamaqiniso aluhlaza cwe futhi abanalo iqiniso," kusho uMariam Mayet, umqondisi omkhulu we-African Centre for Biodiversity, uthe kwi Julayi 2020 webinar.
Ukuthola ukuhlaziywa okuningiliziwe komsebenzi kaLynas, bheka izindatshana ekugcineni kwalokhu okuthunyelwe nokwethu Ishidi lamaqiniso likaMark Lynas.
Isibonelo sakamuva semiyalezo enganembile yindatshana ebhalwe kabanzi kwi-CAS iwebhusayithi nguLynas ethi, "agro-ecology isengozini yokulimaza abampofu." ?? Izifundiswa zichaze lo mbhalo ngokuthi “ukuchazwa kwedemagogic kanye nokungekhona kwesayensi kwephepha lesayensi, ""ayijulile kakhulu, ""imibono emsulwa ”kanye“ nehlazo kumuntu ofuna ukuzibiza ngokwesayensi, ”ukuhlaziywa okuyiphutha ngempela“?? lokho kwenza “ukwenziwa okwandile“?? futhi “iziphetho zasendle.”Abanye abagxeki kubizwe a ukuhoxa.
A Isihloko se-2019 ngozakwabo we-CAS uNassib Mugwanya unikeza esinye isibonelo sokuqukethwe okudukisayo ngesihloko se-agroecology. I-athikili, "Kungani izindlela zendabuko zezolimo zingakwazi ukuguqula ezolimo zase-Afrika," ikhombisa indlela ejwayelekile yokuthumela imiyalezo ezintweni ze-CAS: ukwethula izitshalo ze-GMO njengesikhundla se- "pro-science" ngenkathi kudwetshwa “ezinye izindlela zokuthuthukisa ezolimo njenge 'anti-science, 'akunamhlabathi futhi kuyingozi, ” ngokuya ngokuhlaziya yiSeattle-based Community Alliance for Global Justice.
"Okuqapheleke kakhulu kule ndatshana ukusetshenziswa okunamandla kwezingathekiso (isb. I-agroecology efaniswa nozankosi), ukwenziwa kwezinto ezivamile, ukushiywa kolwazi kanye nokunye okungalungile okuyiqiniso," kusho leli qembu.
Kusetshenziswa ibhuku lokudlala leMonsanto ukuvikela ama-pesticides
Esinye isibonelo semiyalezo edukisayo ehambelana nomkhakha we-CAS singatholakala ekuvikeleni kweqembu i-Roundup-based Roundup. I-herbicides iyinto esemqoka yezitshalo ze-GMO nge Ummbila no-soy ongu-90% kutshalwe e-United States izakhi zofuzo ukubekezelela i-Roundup. Ngo-2015, ngemuva kokuthi iphaneli yocwaningo lomdlavuza le-World Health Organisation lathi i-glyphosate ingumdlavuza wabantu, iMonsanto yahlela ababambisene nabo ukuze "bahlele ukukhala" ngokumelene nephaneli elizimele lesayensi ukuze "livikele isithunzi" seRoundup, ngokusho kwe imibhalo yangaphakathi yeMonsanto.
Ibhuku lokudlala le-Monsanto PR: ukuhlasela ochwepheshe bomdlavuza 'njengezishoshovu'
UMark Lynas usebenzise i- Ipulatifomu ye-CAS ukukhulisa imiyalezo yeMonsanto, echaza umbiko womdlavuza ngokuthi "ukuzingelwa kwabathakathi" okwenziwe "izishoshovu ezilwa neMonsanto" "ezisebenzise kabi isayensi" futhi zenze "ukuphendukezelwa okusobala kwesayensi nobulungiswa bemvelo" ngokubika ingozi yomdlavuza ye-glyphosate. ULynas wasebenzisa okufanayo izimpikiswano ezinamaphutha nemithombo yomkhakha njengoMkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nezempilo, a iqembu langaphambili iMonsanto likhokhelwe ukusiza ukuphotha umbiko womdlavuza.
Ngenkathi ethi usehlangothini lwesayensi, uLynas akabunaki ubufakazi obanele obuvela emibhalweni yeMonsanto, kubikwa kabanzi emaphephandabeni, lokho IMonsanto yaphazamisa nge ucwaningo lwesayensi, izinhlaka ezilawulayo ezilawulwayo futhi ngasebenzisa okunye amaqhinga anzima ukukhohlisa inqubo yesayensi ukuvikela i-Roundup. Ku-2018, ijaji lathola iMonsanto leyowenza ngobubi, ukucindezela noma ukukhwabanisa”Ekumbozeni ingozi yomdlavuza yeRoundup.
Ukunxenxa ama-pesticides kanye nama-GMO
Yize ukugxila kwayo okuyinhloko kuyi-Afrika, i-CAS ibuye isize imizamo yomkhakha wezibulala-zinambuzane ukuvikela izibulala-zinambuzane nokujivaza abameli bezempilo yomphakathi eHawaii. Iziqhingi zaseHawaii ziyindawo yokuhlola ebalulekile yezitshalo ze-GMO futhi nendawo ebika ephezulu ukuvezwa kwemithi yokubulala izinambuzane futhi ukukhathazeka ngezinkinga zezempilo ezihlobene ne-pesticides, kufaka phakathi ukukhubazeka kokuzalwa, umdlavuza nesifuba somoya. Lezi zinkinga zaholela abahlali ukuhlela impi ezothatha iminyaka ukwedlulisa imithethonqubo eqinile yokwehlisa ukuvezwa kwemithi yokubulala izinambuzane nokwenza ngcono ukudalulwa kwamakhemikhali asetshenziswa emasimini ezolimo.
“Uqale ukuhlaselwa ngonya”
Njengoba le mizamo ithola ukubambeka, i-CAS ibambe iqhaza “emkhankasweni omkhulu wokungazwakali kwezobudlelwano bomphakathi obenzelwe ukuthulisa ukukhathazeka komphakathi” ngobungozi bezempilo bemithi yokubulala izinambuzane, ngokusho kukaFern Anuenue Holland, umgqugquzeli womphakathi weHawaii Alliance for Progressive Action. E-Cornell Daily Sun, UHolland uchaze ukuthi “ikhokhelwe kanjani iCornell Alliance for Science fellows - ngaphansi kokuqagela ubuchwepheshe besayensi - iqala kanjani ukuhlasela okunonya. Basebenzise izinkundla zokuxhumana futhi babhala inqwaba yama-blog begxeka amalungu omphakathi athintekile nabanye abaholi ababa nesibindi sokukhuluma. ”
UHolland uthe yena namanye amalungu enhlangano yakhe babulawa "ngokubulawa kwabalingiswa, ukumelwa kabi kanye nokuhlaselwa kokwethembeka komuntu siqu kanye nobungcweti" ngabaphethwe yiCAS. “Ngiye ngazibonela ngawami imindeni nobungani bempilo yonke buhlukana,” kubhala yena.
Ukuphikisana nelungelo lomphakathi lokwazi
Umqondisi we-CAS USarah Evanega, PhD, uye kusho iqembu lakhe ezimele embonini: “Asibhaleli izimboni, futhi asikhuthazi noma siphakamise imikhiqizo ephethwe yimboni. Njengoba iwebhusayithi yethu iveza ngokusobala nangokugcwele, asitholi zinsiza ezivela embonini. ” Kodwa-ke, inqwaba yama-imeyili atholwe yi-US Right to Know, manje athunyelwe ku- Umtapo wolwazi wamakhemikhali we-UCSF, Khombisa i-CAS ne-Evanega bexhumana eduze nemboni yezibulala-zinambuzane namaqembu ayo angaphambili ezinhlelweni zobudlelwano bomphakathi. Izibonelo zifaka:
I-CAS ibambe iqhaza elikhulu ekuzameni ukwehlisa isithunzi uphenyo lwamarekhodi womphakathi olwenziwe yi-US Right to Know ukuthola ulwazi mayelana nokubambisana komkhakha wezibulala-zinambuzane nezifundiswa. Ngokuvumelana ne Imibhalo yeMonsanto ikhishwe ngo-2019, UMonsanto wayekhathazeke kakhulu ngophenyo lwe-USRTK futhi wayehlela ukuzama ukukuhlambalaza njengokuhlasela "inkululeko yesayensi" - umyalezo ofanayo we-CAS owawusetshenziswa esicelweni somphakathi ephikisana nophenyo.
I-CAS ibambisene nesikhalazo neBiofortified, a iqembu elibambe iqhaza ngokumelene nemithetho yokubulala izinambuzane eHawaii e ukunxenxa imboni yezibulala-zinambuzane iqembu lokuhweba, ngenkathi abathi bazimele.
The Uhlelo lweMonsanto PR ukuphikisana nophenyo lwe-USRTK kuphakanyiswe ukuthi kube nesikhulu esiphezulu seMonsanto esifinyelela kuRob Horsch eGates Foundation ukucela usizo ngomzamo.
Umqondisi we-CAS uSarah Evanega ubengumphathiswa ku-2017 we-International Food Information Council, ukudla namakhemikhali iqembu le-PR elixhaswa ngezimboni evikela ushukela, izithasiselo zokudla, ama-GMO kanye ne-pesticides.
Ezinye izibonelo zokubambisana kwe-CAS namaqembu ezimboni zichazwe ezansi kwaleli phepha lamaqiniso.
Ukuphakamisa amaqembu angaphambili, izithunywa ezingathembekile
Emizameni yayo yokuqhakambisa ama-GMO njengesisombululo “esisuselwe kwisayensi” kwezolimo, iCornell Alliance for Science inikeze ithuba layo emaqenjini aphambili embonini ngisho nomuntu ongaziwa ngesayensi yezulu.
UTrevor Butterworth noSense Mayelana neSayensi / STATS: I-CAS ibambisana ne-Sense About Science / STATS ukunikela “ukubonisana kwezibalo zezintatheli”Futhi wanika ukuhlanganyela kumqondisi weqembu uTrevor Butterworth, owakha umsebenzi wakhe wokuvikela imikhiqizo ebalulekile ku Amakhemikhali, ukuthosa, ukudla okungenamsoco futhi izimboni zezidakamizwa. UButterworth ungumphathi ongumsunguli weSense About Science USA, ayihlanganise nesikhungo sakhe sangaphambili, iStatistical Assessment Service (STATS).
Izintatheli zichaze ama-STAT kanye neButterworth njengabadlali ababalulekile emikhankasweni yokuvikela umkhiqizo embonini yamakhemikhali (bheka Izindaba zesitatimende, IMilwaukee Journal Sentinel, I-Intercept futhi I-Atlantic). Imibhalo yeMonsanto iyakhomba I-Sense Mayelana neSayensi phakathi "kozakwethu bemboni" kuthembele ekuvikeleni i-Roundup ekulweni nokukhathazeka komdlavuza.
Isimo sezulu sesayensi yezulu u-Owen Paterson: Ku-2015, i-CAS ibambe u-Owen Paterson, usopolitiki waseBritish Conservative Party futhi owaziwa kakhulu isayensi yezulu ingabaza ngubani kunciphise uxhaso lwemizamo yokunciphisa ukufudumala kwembulunga yonke ngesikhathi sakhe njengoNgqongqoshe Wezemvelo wase-UK. UPaterson usebenzise isigaba saseCornell ukusho ukuthi amaqembu ezemvelo aphakamisa ukukhathazeka ngamaGMOs “vumela izigidi ukuba zife.”Amaqembu embonini yezibulala-zinambuzane asebenzise imiyalezo efanayo eminyakeni engama-50 edlule ukuzama ihlazisa uRachel Carson ngokuveza ukukhathazeka nge-DDT.
Lynas futhi Umuzwa Ngezesayensi: I-Lynas ye-CAS nayo ihlangene ne-Sense About Science njengelungu lebhodi leseluleko lesikhathi eside. Ngo-2015, u-Lynas wabambisana no-Owen Paterson Paterson owayengabaza ngezesimo sezulu kanye no-Sense About Director of Science u-Tracey Brown qalisa lokho akubize "ukunyakaza kwe-ecomodernism," ehambelana ngokubambisana, uhlobo lokulwa nomthethonqubo "kwemvelo."
Ukuvikela imboni eHawaii
Ngo-2016, i-CAS yethule uhlelo lwe- iqembu elihambisanayo elibizwa ngeHawaii Alliance for Science, othe inhloso yayo "ukuxhasa ukwenziwa kwezinqumo okusekelwe ebufakazini kanye nokuqanjwa kwezolimo eziQhingini." Izithunywa zayo zifaka:
USarah Thompson, a owayekade eyisisebenzi seDow AgroSciences, waqondisa i- IHawaii Alliance Yezesayensi, eyayizichaza ngokuthi “iyinhlangano engaphansi engenzi nzuzo yezokuxhumana ehlangene neCornell Alliance for Science.” (Iwebhusayithi ayisabonakali isebenza, kepha iqembu ligcina i- ikhasi Facebook.)
Okuthunyelwe kwezokuxhumana okuvela eHawaii Alliance for Science kanye nomxhumanisi wayo uThompson bachaze abagxeki bemboni yezolimo njengo abantu abazikhukhumezayo nabangazi lutho, kugujwa ummbila kanye nesoya mono-izilimo futhi ukuvikela ama-pesticides we-neonicotinoid okuyinto izifundo eziningi futhi ososayensi bayasho zilimaza izinyosi.
UJoan Conrow, Ukuphatha Umhleli we-CAS, ubhala izindatshana ngaye iwebhusayithi yomuntu siqu, ngamunye "Kauai Eclectic" ibhulogi nangenxa yeqembu eliphambili embonini Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project uzama ukwehlisa isithunzi ochwepheshe bezempilo, amaqembu omphakathi futhi osopolitiki eHawaii abamele ukuvikelwa okunamandla kwezibulala-zinambuzane, nezintatheli ababhala ngokukhathazeka ngezibulala-zinambuzane. IConrow inayo kusolwa amaqembu ezemvelo lokweqa intela kanye kuqhathaniswa neqembu lokuphepha kokudla kuya ku-KKK.
UConrow ubengakudaluli njalo ukuzibandakanya kwakhe neCornell. Iphephandaba laseHawaii i-Civil Beat limgxeke uConrow ngaye ukungabi sobala futhi wamcaphuna ngo-2016 njengesibonelo sokuthi kungani iphepha lishintsha izinqubomgomo zalo zokuphawula. UConrow “wayevame ukuphikisana nombono we-GMO ngaphandle kokuchaza ngokusobala umsebenzi wakhe njengozwela we-GMO,” kubhala uprofesa wezintatheli uBrett Oppegaard. "UConrow ulahlekelwe nayinkululeko yakhe yobuntatheli (nokubika) mayelana nokubika ngokufanele ngezinkinga ze-GMO, ngenxa yomsebenzi wakhe kulezi zinkinga."
UJoni Kamiya, i-CAS ka-2015 Umfo Wobuholi Emhlabeni Wonke uphikisana nemithetho yokubulala izinambuzane kwiwebhusayithi yakhe Indodakazi yoMlimi waseHawaii, In the abezindaba kanye neqembu eliphambili lomkhakha Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project. Ungumama “Uchwepheshe wenxusa” yezimboni zezolimo ezixhaswe ngemali iwebhusayithi yezentengiso Izimpendulo ze-GMO. NjengoConrow, uKamiya uthi ukuvezwa kwezibulala-zinambuzane eHawaii akuyona inkinga, Futhi izama ukudicilela phansi izikhulu ezikhethiwe futhi "Abashisekeli bezemvelo" abafuna ukulawula izibulala-zinambuzane.
I-CAS izichaza ngokuthi "isinyathelo esiseCornell University, isikhungo esingenzi nzuzo." Leli qembu alidaluli isabelomali salo, izindleko zalo noma amaholo abasebenzi, futhi iCornell University ayidaluli noma yiluphi ulwazi mayelana ne-CAS emafayilini ayo.
Uhlu lwewebhusayithi Abasebenzi be-20, kufaka phakathi uMqondisi USarah Evanega, PhD, kanye nokuphatha Umhleli UJoan Conrow (alubhalisi uMark Lynas noma abanye abantu abangathola isinxephezelo). Abanye abasebenzi abaziwayo ababhalwe kuwebhusayithi bafaka:
UGregory Jaffe, Umqondisi Ohambisanayo Wezindaba Zezomthetho we-CAS, futhi unguMqondisi we-Biotechnology for Centre for Science in the Public Interest lapho enza khona i- Imali engu-$ 143,000 kanye nezinzuzo. I-CSPI iphikisana nokulebula kwe-GMO futhi uJaffe uthi “AmaMelika kufanele amukele”Isivuno samanje sokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
UJayson Merkley, elinye lamalungu ayi-10 e-CAS iqembu lokuqeqesha, usebenze njenge umxhumanisi wezokuxhumana kaMarch Against Myths Against Modification, iphrojekthi ye- umkhakha weqembu lezimboni iBiofortified. Ukuze uthole isibonelo semiyalezo edukisayo ebandakanya iMerkley, bona okuthunyelwe kwango-2016, Amaqembu aseCornell axhaswe ngabakwaGates ahlukumeza uVandana Shiva.
Ibhodi lokweluleka le-CAS lifaka phakathi izifundiswa ezihlale zisiza imboni yezolimo ngemizamo yazo ye-PR.
Pamela Ronald, isazi sezakhi zofuzo e-UC Davis, sinokuxhumana namaqembu angaphambili embonini yamakhemikhali nemizamo ye-PR ethi izimele; wasungula futhi wasebenza ebhodini le- Kwenziwe kabusha, futhi basungula imboni eboshwe IGenetic Literacy Project kanye nomsunguli wayo uJon Entine ngeplatifomu e-UC Davis. URonald uthola izinkokhelo zemboni ngokuzibandakanya kokukhuluma; bheka Irisidi engu- $ 10,000 eya eBayer futhi Invoyisi engu- $ 3,000 eya eMonsanto.
U-Alison Van Eenennaam, uchwepheshe wezokwelusa ngokubambisana e-UC Davis, uphikisana no Ukwehlisa ukulawula izilwane ezakhiwe ngezakhi zofuzo azikhulisayo. Ungumkhulumeli wangaphandle oqavile osebenze nemboni yezolimo kwimizamo eyahlukene ye-PR yokuphikisana nemithetho nokusebenza ngokusobala.
UCornell Professor Tony Shelton wayengomunye wosolwazi abaningi kuqashwe iMonsanto ukubhala amaphepha we-pro-GMO ayekhona eshicilelwe ngu iqembu eliphambili lomkhakha Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project ngaphandle kokudalulwa mayelana neqhaza likaMonsanto. UShelton udale impikiswano lapho ecela abafundi bakhe ukuthi banambithe isibulala-zinambuzane, ngokusobala njenge stunt ukukhuthaza ama-GMO.
Ukuhlaziywa kweGates Foundation
Kusukela ngo-2016, iGates Foundation isebenzise imali engaphezulu kuka- $ 4 billion kumasu okuthuthukisa ezolimo, okuningi lokho kugxile e-Afrika. Amasu esisekelo wokuthuthukisa ezolimo abekhona eholwa nguRob Horsch (osanda kuthatha umhlalaphansi), a Umakadebona weMonsanto seminyaka engama-25. Amasu adonse ukugxekwa kokuqhakambisa ama-GMO nemikhiqizo yezolimo e-Afrika ukuphikiswa kwamaqembu azinze e-Afrika nokunyakaza komphakathi, futhi ngaphandle kokukhathazeka okuningi nokungabaza ngezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo e-Afrika yonkana.
Ukuhlaziywa kwendlela yeGates Foundation yokuthuthukiswa kwezolimo nokuxhaswa ngezimali kubandakanya:
Abalimi Abahlulekayo base-Afrika: Ukuhlolwa Komthelela we-Alliance for a Green Revolution e-Afrika, nguTimothy Wise, iTufts Global Development and Environment Institute (2020)
Izithembiso Zamanga: I-Alliance for a Green Revolution e-Afrika, nguRosa Luxtemburg Stiftung et. al. (2020)
'Ukususa indlala ngokungondleki': Owayekade eyisikhulu se-UN ubiza i-African Green Revolution, nguTimothy A. Wise, Isikhungo Sezolimo Nenqubomgomo Yezokuhweba (2020)
`` Inguquko eluhlaza okwehlulekayo eluhlaza okwehlulekayo e-Afrika, '' nguStacy Malkan, Isazi Semvelo (2020)
Ngabe uguquko oluhlaza lwase-Afrika luhlulekile? UDeutsche Welle (2020)
Amaqembu ase-US atshale izigidigidi kumkhakha wezimboni e-Afrika. Ochwepheshe bathi akupheli indlala noma ukusiza abalimi, nguLisa Held, Ukudla Komphakathi (2020)
Imbewu Ye-Neo-Colonialism: Kungani Abagqugquzeli be-GMO Bakuthola Kubi Kangaka Nge-Afrika, isitatimende se-Alliance for Food nobukhosi e-Afrika (2018)
Uhlelo lweGates Foundation's Ceres 2030 Plan Pushes Agenda of Agribusiness, nguJonathan Latham, i-Independent Science News (2018)
IGates Foundation Iqashe I-PR Firm Yokulawula i-UN Over Gene Drives, kaJonathan Latham, i-Independent Science News (2017)
I-Philanthrocapitalism: Izinhlelo ze-Gates Foundation zase-Afrika aziwona umusa, nguPhilip L Bereano, uSolwazi Emeritus e-University of Washington, Third World Resurgence (2017)
Ngabe iBill and Melinda Gates Foundation isiza izinkampani ezinkulu ngaphezu kwabantu abampofu? ngu-Oscar Rickett, iVice (2016)
UBill Gates usemkhankasweni wokuthengisa ama-GMO e-Afrika, kepha akalikhulumi lonke iqiniso, nguStacy Malkan, Alternet (2016)
Amandla Wentuthuko Nokuthuthuka. Ngubani owenza i-ajenda? nguJens Martens noKarolin Seitz, iForamu Yezinqubomgomo Yomhlaba Wonke (2015)
IGates Foundation's Agenda Agenda e-Afrika 'Olunye Uhlobo Lobukoloniyali,' Kuxwayisa Ababhikishi, nguLauren McCauley, Amaphupho ajwayelekile (2015)
Ngabe iGates Foundation iwondla kanjani umhlaba? ukuhlaziywa kwezimali ngombiko we-GRAIN (2014)
UBill Gates usebenzisa inqwaba yezibonelelo zezolimo emazweni acebile, nguJohn Vidal, Guardian (2014)
Ukuthuthukiswa Okuhlanganisiwe: Ngabe iGates Foundation ihlale ingamandla okuhle? Umbiko weGlobal Justice Now (2014)
IBill Gates Isiza KFC Ukuthatha i-Afrika, ngu-Alex Park, uMama Jones (2014)
Ukusebenzisana okuningi kwe-CAS-industry
Inqwaba yama-imeyili atholakele nge-FOIA yi-US Right to Know, futhi manje asethunyelwe ku- Umtapo wolwazi wamakhemikhali we-UCSF, khombisa i-CAS ihlangana eduze nemboni yezolimo kanye namaqembu ayo obudlelwano bomphakathi ukuxhumanisa imicimbi nokuthumela imiyalezo:
Umqondisi we-CAS uSarah Evanega wasebenza noMonsanto's Cami Ryan ukuhlela i uchungechunge lwamasifundisane ngo-2017 ukukhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
Ukuphendula isicelo kusuka kusikhulu seDuPont Pioneer, U-Evanega waqasha uSolwazi Kevin Folta waseYunivesithi yaseFlorida ukuba azokhuluma ne-University-Industry Consortium, iqembu elisebenza ukugcina "inzuzo yokuncintisana" yamalungu ayo ezinkampani nezifundiswa. Yize uFolta enakho udukise umphakathi ngobudlelwano bakhe nezimboni, U-Evanega umnyusile njengo “iqhawe elimangalisayo lenguquko"Futhi"imodeli yososayensi. "
U-Evanega umeme i-CAS Ilungu lebhodi elelulekayo u-Alison Van Eenennaam, uchwepheshe wezokwelusa ngokubambisana e-UC Davis, ukuze khuluma eDuPont Pioneer exhaswa ngemali ICornell Breeding Symposium. Ama-imeyili akhombisa u-Evanega ecela uVan Eenennaam ukuthi afake imibono ngesiphakamiso sikahulumeni sokulawula ama-GMO, futhi abonisane ngokuthi kwenziwa kanjani izinto zabesifazane zokukhuthaza ama-GMO.
U-Evanega wakhonza eqenjini elisebenzayo we-UC Davis Institute for Food and Agricultural Literacy (IFAL), kanye nabasebenzi baseMonsanto namaqembu amabili aphambili embonini, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa. Amaqembu abambisene ngokubambisana i- "ikamu lokuqeqeshwa" elixhaswe umkhakha kuya qeqesha ososayensi nabafundi ukukhuthaza nokuvikela ama-GMO kanye ne-pesticides.
Ukuhlaziywa okuningi kukaMark Lynas
Ukukhushulwa okungalungile, okukhohlisayo kukaMark Lynas kwe-ajenda yezolimo - Ishidi lamaqiniso le-USRTK (livuselelwa njalo)
UMark Lynas ugxeke ngokuxhaphaza izithombe zabalimi base-Afrika ukukhuthaza ama-GMO, Isikhungo sase-Afrika Sokuphilayo (2018)
Imbewu Ye-Neo-Colonialism - Okwenza Abagqugquzeli be-GMO Bakuthole Okungalungile Nge-Afrika - I-Alliance for Ubukhosi Bokudla e-Afrika (2018)
Isayensi isaphumile ku-GMO Safety, nguDavid Schubert, PhD, Head, Cellular Neurobiology Laboratory & Professor e-The Salk Institute for Biological Studies, incwadi yaseSan Diego Union Tribune (2018)
Ubudedengu Bokufuna Wonke Ama-GMO Kuphephile, ngo-Belinda Martineau, u-PhD Biotech Salon no Incwadi eya ku-NYT (2015)
Impi yabagxeki bokudla okushintshwe izakhi zofuzo, nguTimothy A. Wise, Food Tank
USolwazi John Vandermeer uphonsela inselelo isazi sezemvelo uMark Lynas kuma-GMO, Ukudla Okokuqala (2014)
Isayensi, iDogma noMark Lynas, nguDoug Gurian-Sherman, PhD, Union of Concerned Scientists (2013)
Izimangalo Ezidukisayo Ezenziwa NguMark Lynas Nakuye, Ukubuka kwe-GM (2013)
Kwezinganekwane Namadoda: UMark Lynas kanye Namandla Okudakisayo Wobuchwepheshe, ngu-Eric Holt-Giménez, PhD, Director Director Food / Institute of Food Policy and Development, eHuffington Post (2013)
Usosayensi: Ubunjiniyela Bofuzo bususelwa kulwazi olungaphelele, I-Q & A noJohn Vendermeer (2013)
Izingcezu ezingama-22 Zesayensi Engafuneki Ezivela KuLynas Manifesto, nguBrian John, PhD, Permaculture Research Institute (2013)
Ukuphindiselwa emuva kuMark Lynas 'GMO Reversal, nguJason Mark, Earth Island Journal (2013)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane, Abathandekayo ACSH, U-Alison Van Eenennaam, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, U-Anthony Shelton, BASF, Bayer, Kwenziwe kabusha, I-CBI, Isikhungo Senkululeko Yabathengi, Isikhungo Sesayensi Emphakathini, ICornell Alliance yeSayensi, ICornell College of Agriculture neLife Science, ICornell Office Yezinhlelo Zamanye Amazwe, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, I-CSPI, IDow AgroSciences, DowDuPont, ecomodernism, AmaGates Foundation, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGil Ross, Abaholi Bomhlaba Wonke Bobuholi, Izimpendulo ze-GMO, UGregory Jaffe, IHawaii Alliance Yezesayensi, Indodakazi yoMlimi waseHawaii, UJayson Merkley, UJoan Conrow, UJoni Kamiya, IKauai Eclectic, UKevin Folta, Mashi Ngokumelana Nezinkoleloze Zokulwa Nokuguqulwa, UMark Lynas, Monsanto, U-Owen Paterson, Pamela Ronald, URick Berman, URob Horsch, USarah Evanega, Sarah Thompson, Iphrojekthi Yezesayensi Yokufunda, Umuzwa Ngezesayensi, IZIBALO, Syngenta, UTracey Brown, UTrevor Butterworth, Inyuvesi yaseCalifornia Davis, University of Florida
I-Paraquat Trial Tracker
Amaphepha eMonsanto: I-Roundup (Glyphosate) Imilingo Eyisisekelo Yokuhlolwa Komdlavuza Nokuhlaziywa
Hambisa ukuhlanganisa amacala e-paraquat yase-US njengoba amacala enyuka eSyngenta
Umkhankaso weMonsanto Wokulwa Nathi Ilungelo Lokwazi: Funda Amadokhumenti
Mashi 16, 2021
I-US Ilungelo Lokwazi
Ilayisensi ye-Creative Commons>
Vala le module
Bhalisela incwadi yethu yezindaba. Thola izibuyekezo zamasonto onke ebhokisini lakho lokungenayo.
Ikheli le-imeyili Faka ikheli lakho le-imeyili